Injani Le Ukudla Kuhle Ukuze Yidla On Izitimela | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela > Injani Le Ukudla Kuhle Ukuze Yidla On Izitimela
Injani Le Ukudla Kuhle Ukuze Yidla On Izitimela
Kuhle ukudla ukudla ezitimeleni kukhona namuhla empeleni okumnandi kakhulu. Ngenxa izitimela eziningi zinikeza 5-star yokuhlala kanye ukudla ekilasini lokuqala. Lokhu kuhlanganisa ukudla eyenziwe ezweni labapheki ezidumile. Cishe esetshenziswa kokufunda mayelana emangalisayo ukudla eziteshini zesitimela noma nezindawo ezinhle ungabona kwi uhambo ngesitimela. Ngakho-ke kungase kukumangaze ukwazi ukuthi ukudla nawe ungadla esitimeleni Kuyathokozisa enkulu.
Nazi phezulu 7 ukudla zokudla ezitimeleni nawe ungadla
1: Belmond British Pullman (Zase-UK)
Isuka ku izindawo eziningi eBrithani kusukela London, lokhu isitimela inikeza yokudlela isipiliyoni esihle. Ezokudla kuhlanganisa ukudla adalwe udumo labapheki Tom Kerridge futhi Anton Mosimann abenza lalidume elite yokudlela amakilabhu abo UK.
2: Belmond uHiram Bingham (Peru)
Mhlawumbe uhambo kakhulu amahle ebabazekayo emhlabeni. Lokhu 1920 okunethezeka isitayela isitimela ukuthi uhamba emaphandleni-Peruvian linikeza ukudla enkulu. Labo babusi abane-Yebo Andes ephefumulelwe imenyu kuhlanganisa okujabulisa efana ham crispy kanye zikagamthilini kanye yenkomo yamagilebhisi futhi tartar.
3: Blue Train (Iningizimu Afrika) – Afrika ukudla zokudla ezitimeleni
Lokhu okunikezwayo isitimela 5 Star Cuisine eyaziwa ngokuthi “Cordon Blue,” okuhlanganisa izitsha ezihlukahlukene enziwe izithako bendawo. Ezinye izibiliboco okumnandi Ngokwesibonelo nentshe, South African oyster, futhi inyama yenyamazana.
4: Omkhulu Southern Rail (Australia)
Ngokufanayo kuya Blue Train, ungakwazi ukujabulela fresh ukudla endaweni kumthombo kule Australian Southern Rail. labapheki, abahlinzeki bendawo, nabafuyi baye bahlangana ndawonye ukudala i cuisine Australian ukuthi iletha okuhle kokubili ukudla newayini. Isitimela izici zokudla eziningana ukuthi ukunikeza izitsha ophakeme. Ngokwesibonelo kangaroo, saltbush futhi zasendle rosella imbali, barramundi noMargaret River ushizi.
5: Napa Valley Iwayini zemininingwane (California) – Melika ukudla zokudla ezitimeleni
Kunjalo, isitimela nalo lolu hlobo igama uyokhonza iwayini kakhulu ngobuningi kubuye ukudla okukhulu. I 3 emakhishini ebhodini ukunikeza abagibeli amaningi Yiqiniso gourmet ukudla isitimela ukuthi zaklama futhi zakha izindawo e 1917.
Kwasekuqaleni, amagama Orient Express kuyahambisana-in-hand nge ukudla kwekhethelo. Lokhu edumile emhlabeni wonke isitimela yohambo ngokusebenzisa i-Yurophu nokunikezwa ukudla enziwe izithako fresh eqoqwe phezu izitimela izitobhi. Umpheki ebhodini Yannick Alleno uye ukusungulwa isigaba inkathi eyedlule nge izitsha like Royal uphizi, Bresse inkukhu fricassee nge amakhowe nelayisi okugazingiwe.
7: Royal ngoSelkirk (Scotland) – ukudla yaseYurophu zokudla ezitimeleni
Kugcine ku olufinqiwe kwethu izitimela esihle yokudlela, lokhu isitimela izici izimoto mlando okubili okwenzeka yokudlela. Ungakwazi ukujabulela ukudla bendabuko ezifana kippers noma ibhulakufesi Scottish. Sicela uqaphele ukuthi idina kule isitimela lehlelekile, ngakho-ke qiniseka ukuthi namanenekazi ukugqoka jackets nowesifazane ingubo ngokufanele cuisine.
amathikithi Incwadi Yabo izitimela nge ukudla okumnandi
On manje ukuthi usuqedile ukufunda, ngakho ucabangani the best ukudla ukudla ezitimeleni. Ngezinye Londoloza Isitimela esizihlanganisayo izitimela kulo lonke elaseYurophu ezinikeza ngokudla kakhulu abagibeli. ayikaze Ukubhuka ithikithi isitimela kulula. ukubhuka isitimela ikhambo lakho kusayithi lethu manje futhi esikhathini esingaphansi 3 imizuzu ungathola ithikithi isitimela ephelele ukuze nithathe uhambo lwenu. Thenga Uqeqesha Amathikithi ngezindlela eziningi ngaphezu Credit Card ezinkulu.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-meals-trains%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha / ru ukuba / fr noma / izilimi de nokuningi.
#ukudla amathiphu isitimela Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi